नेकपा : नाटक बन्द गर्ने कि जनताको ढुंगा खाने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
नेकपा : नाटक बन्द गर्ने कि जनताको ढुंगा खाने ?
२०७७ श्रावण ५, सोमबार १०:२२:००
सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुको दैनिकी हेर्दा मुलुक महाविपत्तिमा छ भन्दा पनि उल्लु हुने अवस्था छ । अझ सरुवा रोगको महाव्याधिका कारण हिँडडुल र भेला प्रतिबन्धका नियम सरकारले नै लागू गरेको मान्न झन् कठिन छ ।
नेताहरु युट्युबरलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्, ‘सुकुटी, भुटन, तारेको, झानेको जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै आफै बनाएर खाइरहेका छौँ । परिवारका सबै बसेर आगोमै पकाएको, सेकाएको खूब मीठो हुने रहेछ ।’
केही युवा प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रिएका छन् । पीसीआर परीक्षण बढाऊ । जनताको ज्यान जोगाऊ । गरीबलाई छहारी देऊ ।
नेताहरु कोठे बैठकमा गनगन गर्न थाल्छन्– जनता सडकमा उत्रिएका छन् । सरकार के हेर्दै छ ? खुरुक्क राजीनामा नदिएर नकच्चरो भएर बस्न पाइन्छ ? तुरुन्त बैठक बोलाउनुपर्छ ।
बैठक सुरु हुन्छ । पाखुरा सुर्कासुर्की हुन्छ । राजीनामा दे । दिन्नँ । दिनैपर्छ । भारतले भनेर हुन्छ ? भारतले होइन, मैले भनेको । तैँले भनेको के प्रमाण छ ? ल त्यसो भए बैठक स्थगित ।
दृश्य ५ देखि:
दुई नेता गोप्य वार्ता गर्छन् । फेरि बैठक बोलाउँछन् । बैठक स्थगित गर्छन् । फेरि वार्ता गर्छन् । यताउता कुदेजस्तो गर्छन् । फेरि बैठक बोलाउँछन् । स्थगित गर्छन् । आज स्थायी समिति । भोलि सचिवालय । निर्णय शून्य । नतिजा शून्य ।
नाटक सकिएको छैन । एकपटक मञ्चतिर हेर्न छाडौँ । दर्शकदीर्घातिर फर्किऊँ ।
कोही रोइरहेका छन् । कोही छटपटाइरहेका छन् । कोही रगताम्य छन् । कोही हातखुट्टा गुमाइरहेका छन् । लालाबालाको चिच्याहट । घर घाट भएका छन् । गाउँ बगर भएका छन् ।
महामारी । बाढी, पहिरो । सलहको प्रकोप । खेतमा मल अभाव । सहरमा सन्नाटा । गाउँमा हाहाकार ।
उता मञ्चमा नौटंकी चलिरहेकै छ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महाव्याधिले विश्वकै महाशक्तिहरुलाई हायलकायल पारिरहेका बेला नेपालजस्तो कुनै प्रणाली र पद्धतिले काम नगर्ने मुलुकमा जनतासँग पशुपतिनाथलाई पुकार्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
बाढी र पहिरोले गाउँ नै बगाएका छन् । परिवार सखाप भएका छन् । विस्थापितहरु चाउचाउ र बोराको पर्खाइमा आकाश हेर्दै हेलिकप्टर कुरिरहेका छन् । ऋणसापट गरी सानोठूलो उद्योग गर्न तम्सिएकाहरु अत्यासिएका छन् ।
आत्महत्याको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ । लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अनिश्चय र अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ । तिनलाई बाटो देखाउने शिक्षकको चुलो बल्न छाडेको छ । बल्लतल्ल तीन महिनापछि मुखैमा पर्न लागेको गाँस पनि सरकारी नालायकीका कारण खोसिन पुगेको छ ।
गरिखानेहरु छटपटी र बेचैनीमा गलेका छन् । तर, मुलुक हाँकेर बसेका नेताहरु यी कुनै विषय नै होइनन् जस्तो गरी दिनदिनै निष्कर्षहीन बैठक र वार्तामा समय गुजारिरहेका छन् । सिसिफसको कथामा जस्तो कुनै नतिजा नआउने घनचक्करमा यिनका दैनिकी बितिरहेका छन् र नेपाली जनतालाई थप अन्योल र अत्यासमा पारिरहेका छन् ।
दुई तिहाई नजिकको दलमा एउटै चालकले नभ्याउने भनेर दुई–दुईवटा पाइलटको व्यवस्था गरिएको छ । ती दुई पाइलट गन्तव्यमा पुर्याउनु त परै जाओस्, बिमान टेकअफ गर्दागर्दै ककपिटमा एकअर्काको गाँड कोर्न थालेका छन् । सचिवालय र स्थायी समितिका क्याबिन क्रूहरु दुई पाइलटको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् । एकलाई अर्का विरुद्ध उचाल्ने र पछार्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
गन्तव्यमा पुग्ने हतारोमा भएका यात्रुहरु तिनै पाइलटको कलाविहीन नाटक हेर्न बाध्य छन् । ती पाइलटलाई यात्रुको कुनै पर्वाह छैन । यात्रुमा कति छटपटी छ ? भोकै, प्यासै छन् । बिरामीले औषधी पाएका छैनन् । कुन बेला जहाज खस्ने हो ? इन्धन सकिने हो कि ? इन्जिन बिग्रिने हो कि ? चरा वा पहाडका भित्तामा ठोक्किने हो कि ? दिशा परिवर्तन हुने हो कि ? चिन्ताले सबलाई थिलथिलो बनाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीका टावरबाट एटीसीले आकस्मिक अवतरण गर्न सूचना पठाए पनि पाइलटलाई सुन्ने फुर्सद छैन । भोलि फोर्स ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा सिमसार नभेटिन सक्छ । साउन–भदौ यत्तिकै सकिएपछि सिमसार नभेटिने सम्भावना अझ बढ्छ । दुर्घटना भइहालेमा पाइलट र क्याबिन क्रूहरु भाग्न र उम्किन सक्लान् । किनभने, पटकपटकका दुर्घटनाबाट आफू मात्र जोगिएर धेरै यात्रुलाई यिनले डुबाइसकेका छन् । खति बेहोर्ने फेरि पनि यात्रु नै हुनेछन् । किनकि, तिनको बिमा पनि छैन ।
यतिखेर यी पाइलट र क्याबिन क्रूहरु देशै डुबाउने खेलमा उद्यत देखिन्छन् । महाविपत्ति र यसका बहाआयामिक असरले देश र जनतालाई खर्लप्पै खाइसक्दा पनि नेताहरु कृत्रिम समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । वास्तविक समस्यालाई ओझेल पार्ने गरी मुलुकको खास समस्या नै यिनको कुर्सीको व्यवस्थान होजस्तो बनाइएको छ । पार्टी फुट्ने कि नफुट्ने, सत्ता छोड्ने कि नछोड्ने, छोडिहाले आफूले पालो पाउने कि नपाउने भन्ने मूल सर्त बनाइएको छ ।
यतिखेर यिनको पार्टी फुटोस् कि रहोस्, यीमध्ये कोही सत्तामा रहोस् कि नरहोस् जनतालाई के मतलब ? बिरामीलाई सिटामोल चाहिएको छ । थातबास खोसिएकालाई साउने झरीमा ओत चाहिएको छ । व्यवसाय चौपट भएकाहरुलाई ढाढस चाहिएको छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुन नदिन वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइको बन्दोबस्त चाहिएको छ । शिक्षक र अरु तमाम काम गुमाएका युवालाई रोजीरोटी चाहिएको छ ।
केही नेताका स्वार्थमा जकडिएको राजनीतिक समस्यासँग आमजनताको के सरोकार ? प्रचण्डले कुर्सी पाएनन् रे ल । सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा आफन्त गुमाउने परिवारको पीडासँग त्यसको के सरोकार ? अथवा उनले पाए रे ल । के भोका जनताले भोलिपल्टै खिरपाक ताउली शैलीमा थालमा बनिबनाउ परिकार पाउँछन् ? अहिले मल खोजिरहेका किसानहरु धुरुधुरु रोइरहेका छन् । किसानका नाममा राज्यले दिएको साढे ३ अर्ब अनुदान लिएर प्रचण्डका घरबेटी बेपत्ता छन् । के जनतालाई यो कुरा थाहा छैन र ?
माधव नेपाल र केपी ओलीको जन्मजात झगडा नेपाली जनतालाई थाहा भएको कम्तीमा २५ वर्ष भइसकेको छ । यतिखेर ती दुईजनाको पुरानै नाटक दोहोर्याउनुको के अर्थ छ ? वामदेव गौतम को हुन् भन्ने कुरा उनकै पार्टीका प्रदीप नेपालले टुँडीखेलबाटै उद्घोष गरिसकेका हुन् ।
त्यो कुरा विस्मृतिमा गएको हो भने पनि ताजै घटना छ । गृह मन्त्रालयले साढे ३८ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न बनाइएको ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको टोलीले काम नसक्दै समिति नै तितरबितर किन र कसरी बनाइयो ? यो कुरा के गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा सचिव प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक गरिदिए भएन र ?
केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड आज मिल्यौँ भन्छन् । भोलि मिलेनौँ भन्छन् । तिनका यी भाँडाकुटीसँग आमनागरिकको के सरोकार ?
देश र जनताले हरेक एकएक सेकेन्ड समयको हिसाब राखेका छन् । छैनन् भने पनि राख्नुपर्छ । एकजनाको एक सेकेन्ड भनेको ३ करोड नेपालीको ३ करोड सेकेन्ड हो । देशको जीवनमा ३ करोड सेकेन्ड भनेको कति महत्वपूर्ण होला, आफै हिसाब गर्नुहोस् ।
यहाँ त सेकेन्ड होइन, शताब्दी नै यसैगरी बिताउन खोजिँदै छ । विसं १९९७ सालमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठले आफ्नो जीवन आहुति दिएको पनि ८७ वर्ष भइसकेको छ । के ती सहिदको सपना प्रचण्ड र ओलीका यस्तै कलाविहीन, सारहीन, सिद्धान्तहीन र सन्देशहीन नौटंकी मञ्चनका लागि हो ?
आज ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम दृश्यमा छन् । भोलि अरु आउनेछन् । हिजो केही यिनै र केही अरु थिए । तर प्रवृत्ति उही छ । परिदृश्य उही छ । जनता वाक्कदिक्क भइसके । हरेक पुस्ताले देशमा भविष्य देख्न छाडिसकेको छ ।
यो देशको यो हालत भएको भनेको नेताले नबनाइदिएर नै हो । होइन भने नेपालभन्दा निकै कठिन भूगोल भएका, सुख्खा मरुभूमिमा समेत आवादी गरिएको छ । नेपाली युवाले समेत खाडीका मरुभूमिमा सुन फलाएका छन् । कतारमा विश्वकप फुटबलका निम्ति नेपालीले नै ठूल्ठूला रंगशाला बनाएका छन् भने आफ्नो देश किन बनाउँदैनन् ? किनभने, पाइलट ककपिटमै झगडा गरिरहेका छन् । अझ भनौँ, उनीहरु झगडाको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।
आफै समस्या सिर्जना गर्ने, त्यही समस्यालाई गिँजोल्ने, पाखुरा सुर्कासुर्की गर्ने, जनताका छोराछोरीलाई बलि चढाउने अनि देश र जनताका नाममा ऐतिहासिक त्याग गरेको भन्दै संयुक्तरुपमा फूलमाला लगाउने यस्ता नेताहरुको हातमा देश रहेसम्म कहिल्यै उँभो लाग्दैन ।
यसकारण ओली मात्र होइन, सबै पार्टीको पहिलो पंक्तिका सबै नेताहरुको विस्थापन अनिवार्य छ । यदि पार्टीभित्रबाट दोस्रो पुस्ताले कू गर्न सकेन भने जनताले हस्तक्षेप गर्नेछन् । जनतालाई सधैँ भेडो ठानिरहेमा तिनले रमिता मात्र हेरिरहने छैनन् । याद राखून्, तिनले ढुंगा हान्ने सामथ्र्य पनि राख्छन् । यो कुरा नेपाली जनताले त झन् धेरै पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
ओलीको सेखी झार्न खोज्नेहरु आफै मक्किएका, दोस्रो पुस्ता अघि सर्न सक्ला ?
ओलीविरूद्ध ‘कू’को प्रयास विफल, मदनको विरासत पाउन प्रचण्डले अब के गर्ने ?
बहुमतको बलमा हटाउन खोजे ओलीले निर्णय नमान्ने: बरु एकता नै भंग भएको घोषणा गर्ने